किन चर्किँदैछ मृत्युदण्डको माग ?
ब्लग किन चर्किँदैछ मृत्युदण्डको माग ?
बाह्रखरी - मंगलबार, भदौ ५, २०७५
सिंहदरबारको छेवैमा केही महिलाले शनिवार पेटीकोटमात्रै लगाएर विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरुको प्रदर्शनमा लागेको मुख्य नारा थियो – बलात्कारीलाई फाँसी (मृत्युदण्ड) देऊ ! मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले बलात्कारीलाई हुने सजायबारे कडा कानुन नबनाएकोले त्यसलाई संशोधन गर्दै बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने भन्दै महिलाहरुले अर्धनग्न प्रदर्शन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजधानीमा सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख विपक्षी दललगायतलाई विषयवस्तु बुझेरमात्रै सरकारको विरोध गर्न सुझाव दिए । अहिलेको बलात्कारविरुद्धको आन्दोलनका हकका भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै विषयवस्तुलाई अनर्थ लाग्नेगरी अली बढी नै बुझिदिएको भान हुन्छ । आन्दोलनकारीले ‘‘हामी त विषयवस्तु बुझेरै विरोधमा उत्रेका हौंँ । कसैले भनेर सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भनेर लागेका होइनौं । नआत्तिनुस्, बरु तपाईंले विषयवस्तु कति बुझ्नु भयो ? ” भनेर प्रधानमन्त्रीलाई उत्तर दिएजस्तो लाग्छ ।
माइतीघरको केही दिन अगाडिको दृश्यले २०६४ सालमा बादी महिलाहरुको एउटा समूहले सिहंदरबार अगाडि पेटीकोट र ब्रामात्रै लगाएर अर्धनग्न प्रर्दशन गरेको सम्झना हुन्छ । उनीहरुको चेहरामा पनि उस्तै आक्रोश र चित्कार थियो ।
छोटा लुगा अहिलेको ‘फेसन ट्रेन्ड’ भएपनि सबैलाई लगाउन मन पर्छ भन्नै छैन । तर, रोजाइको छोटा लुगा र बाध्यताले नांगिनु अनि कसैद्वारा बलपूर्वक नंग्याउनुमा ठूलो अन्तर हुन्छ ।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नेहरू महिलाहरु को अनुहारमा आगो थियो । पुलिस प्रशासनको धरपकडले स्थिति भयावह बनेको थियो । थुप्रै महिला अधोवस्त्र मात्र लगाएकै अवस्थामा पक्राउ पनि परे । बालबालिकालाई कसैले गालामा थप्पड मात्रै हान्यो वा पिट्यो भने पनि तिनीहरु कोहोलो मच्चाउँछन् । पीडाको तरलरुप आँखा र नाकबाट एकै निमेषमा बग्छ । यस्तोमा योनी नै फुट्नेगरी करणी गर्दाको तिनलाई हुने पीडा र चित्कार सुन्न नसकेको या सुन्न नचाहेको सरकारलाई सुनाउने तरिका त्यसरी खोजेका हुन् ती महिलाले । आन्दोलित महिलाहरुले राज्यले बलात्कारमा परेकी महिला र बालबालिकाको पीडालाई बोध गर्न नसकेको गुनासो गर्र्दै थिए ।
विगत केही समयदेखि बलात्कारको घटना निकै बढेको छ । कंचनपुरमा भएको निर्मला बलात्कार एवं हत्याकाण्ड त्यस्तै झापामा १० दिनमा तीन वटा बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको छ । संचारमाध्यममा तीन वर्षकी बालिकादेखि ७७ वर्षीया वृद्धा बलात्कारका सिकार भएको समाचार आएका छन् । साउन महिनामा मात्रै झापामा जिल्लामा बलात्कारका ४ वटा घटना सार्वजनिक भएको हो । यो एउटै जिल्लाको यस्तो भयावह अवस्था छ भने देशैभरको हालत कति विकराल होला ?
बलात्कारपछि ज्यानलिने ज्यानमाराका लागि सरकारले कडा कानुन ल्याउनसमेत सचेत नभएपछि के गरुन् त तिनले ? राज्यलाई सचेत गराउन र बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई कडा कानुनको दायरामा ल्याउन आफैँलाई नंग्याए । फितलो कानुनले बारम्बार महिला, बालबालिकालाई नंग्याउँछ ।